I-OEM fiberglass yomelele i-FRP GRP mveliso kunye nabenzi | Weijia
Zu panel panel nothango ikakhulu kusetyenziswa njengendawo yokuhamba, ngokuba nentlaka sinikela IVinyl Ester nentlaka, ISO (isophthalic) nentlaka o-phthali (Orthophthalic) nentlaka. I-frp etyhidiweyo kunye ne-pultruded frp nothango zombini ziyafumaneka!
Iimpawu zezi zilandelayo:
Inokumelana okuhle kwe-asidi, ukumelana nealkali, ukunyibilikiswa kwezinto eziphilayo kunye nokumelana netyuwa; Irhasi kunye neepropati umhlwa ulwelo, kwaye ukongama engenakuthelekiswa nanto kwicandelo anti-umhlwa.
Ngokweemfuno zezihlandlo zokusebenzisa, i-o-phthalic, isophthalic, kunye neevinyl resins zinokukhethwa ngokwezoqoqosho njengezinto zematriki.
Khaphukhaphu, amandla aphezulu, kwaye kulula ukusika kunye nofakelo
Njengombumba we-resin kunye nefayibha yeglasi, ubuninzi bayo bungaphantsi kwe-2 kg ngekyubmitha nganye, kuphela i-1/4 yentsimbi, 2/3 ye-aluminium. Amandla ayo ngamaxesha angama-10 e-PVC eqinile, kwaye amandla ayo apheleleyo agqitha kune-aluminium kunye nentsimbi yesiqhelo. Ubunzima bayo bokukhanya bunokunciphisa kakhulu inkxaso yesiseko, ngaloo ndlela kuncitshiswe iindleko zeprojekthi.
Ukusika nokufakelwa kwayo kulula, kuphela inani elincinci labasebenzi kunye nezixhobo zombane ezifunekayo, ezinciphisa kakhulu iindleko zokufaka. Anti-ukwaluphala, ubomi inkonzo iminyaka engaphezu kwama-20.
Idangatye elidangayo. Izinga lokusasazeka kwelangatye legrille eqhelekileyo egcina ilangatye (ASTM E-84) ayidluli kuma-25; Umgangatho wokusasazeka kwelangatye we-vinyl grille ohamba phambili awudluli kwi-10. Isalathiso seoksijini asikho ngaphantsi kwe-28 (GB 8924).
Ine-insulation efanelekileyo yombane kwaye akukho kophuka phantsi kwe-10KV yevolthi; ayinazinto ze-electromagnetic kwaye inokusetyenziswa kwizixhobo ezibucayi ngemagnethi; Ubume obukhethekileyo befayibha yeglasi eyomeleziweyo yeplastiki grille ikwanazo neempawu zokulwa isiliphu kunye nokudinwa.
Umbala unokukhethwa ngokungenasizathu. Umbala ungenziwa ngemfuneko ngokweemfuno zabathengi. Ngokubanzi, imibala ye-FRP ye-gratings yile: mthubi, mnyama, ngwevu, luhlaza, luhlaza okwesibhakabhaka, bomvu, kwaye kungafihli nto. Ngexesha lokusetyenziswa, umbala omnye unokusetyenziswa wedwa okanye ngokudibeneyo.
Ukomelela kwesakhono sokuyila Ubungakanani buguquguqukayo kwaye bahlukile, kulula ukusika, kunye nokuzinzileyo kubukhulu
Egqithileyo Isikali seAnti esiTyhidiweyo esiQinisekisiweyo seAluminiyam
Okulandelayo: Ucingo locingo olubiyele lwe-3D
Zu Grp nothango lwaso lobhedu
Zu enemingxuma nothango lwaso lobhedu
Zu Ukubunjwa nothango lwaso lobhedu
Zu Ukubumba Gratings
Zu Walkway nothango
Glass Fibre nothango lwaso lobhedu
Grp kumgangatho nothango lwaso lobhedu
Uthango Frp nothango lwaso lobhedu